Dagaal ka dhacay dagmada Balanbale ee gobalka Galgaduud – Somali Top News
Dagaal ka dhacay dagmada Balanbale ee gobalka Galgaduud
September 12, 2019 Somali Top News	0 Comments Dagaal ka dhacay dagmada Balanbale ee gobalka Galgaduud
Wararka laga haleyo degmada Balanbale ee Gobolka Galgaduud ayaa waxaa ay sheegayaan in saakay duleedka degmadaasi uu ka dhacay dagaal sababay khasaaro isgu jira dhimsho iyo dhaawac.
Dagaalka oo u dhaxeeya labada Maleeshiyo beeleed ayaa waxaa uu ka dhacay Deegaanka Ribadle oo hoostaga degmada Balanbale ee Gobolka Hiiraan,waxaana inta la xaqiijiyay dagaalkaas ku geeriyooday hal Ruux oo maleeshiyaadkad agaalamay ah halka laba kale ay ku dhaawacmeen.
Dad ku sugan degmada Balanbale ayaa waxaa ay sheegeen in dagaalkaas uu saameyn ku yeeshay degmada,isla markaana dadku ay ka cabsi qabaan uu saameeyo dadka walaalaha ah ee ku nool deegaano badan oo ka tirsan gobolka Galgaduud.
Dagaalka ka dhacay deegaan duleedka ka ah degmada Balanbale ee Gobolka Galgaduud ayaa waxaa uu daba socdaaa dilal maalmihii la soo dhaafay ka dhacay deegaano hoostaga degmooyinka Balanbale iyo Guriceel ee Gobolkaasi Galgaduud.
← Uhuru: KDF will not withdraw from Somalia until Al-Shabaab surrenders
Sarkaal Shabaab ahaa oo ciidanka dowladda isku soo dhiibay →
Dad shacab ah oo dilay Saraakiil iyo Askar Shabaab ah
Dowladda Federalka oo ka hadashay xiisadda ka taagan gobalka Hiiraan